जाजरकोट दरबार दैनिक जीर्ण बन्दै, पुनःनिर्माणको पर्खाइमा
जाजरकोट, असोज १० । ऐतिहासिक जाजरकोट दरबार दैनिक जीर्ण बन्दै गएको छ । विसं १८२५ मा जाजरकोटका राजा हरि शाहले निर्माण गरेको यो दरबार दैनिक जीर्ण बन्दै गएको हो । राजा हरि शाहले निर्माण गरेको जाजरकोट दरबार कला र पुरातात्विक महत्व दुवै दृष्टिकोणले निकै आकर्षक मानिन्छ ।
आज मिति २०७६ असार ५ गते विहिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ असार ४ गते बुधबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ असार ३ गते मंगलबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ असार २ गते सोमबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
असार महिनाको पहिलो दिन आज मिति २०७६ असार १ गते आइतबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
जेष्ठ महिनाको अन्तीम दिन आज मिति २०७६ जेष्ठ ३२ गते शनिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ ३१ गते शुक्रबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ ३० गते बिहिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ २९ गते बुधबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ २७ गते सोमबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ २६ गते आइतबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ २५ गते शनिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ २४ गते शुक्रबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ २३ गते विहिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ २२ गते बुधबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
मिथिला क्षेत्रमा विवाहित महिलाले बरसाइत पर्व मनाउँदै
आज मिति २०७६ जेष्ठ २१ गते मंगलबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ २० गते सोमबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
‘संस्कृतले शुद्धता र स्पष्टताको ज्ञान दिन्छ’
आज मिति २०७६ जेष्ठ १९ गते आइतबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ १८ गते शनिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ १७ गते शुक्रबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ १६ गते बिहिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ १५ गते बुधबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ १४ गते मंगलबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ १३ गते सोमबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ १२ गते आइतबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ ११ गते शनिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ १० गते शुक्रबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ ८ गते बुधबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ ७ गते मंगलबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ ६ गते सोमबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ ५ गते आइतबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
गोरखानाथ मन्दिरमा १६औँ सवा लाख रोट महोत्सव शुरु
आज मिति २०७६ जेष्ठ ४ गते शनिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ ३ गते शुक्रबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ जेष्ठ २ गते बिहिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज बैशाख महिनाको अन्तीम दिन, मिति २०७६ बैशाख ३१ गते मंगलबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख ३० गते सोमबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख २९ गते आइतबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख २८ गते शनिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख २७ गते शुक्रबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
सडक खन्ने क्रममा भेटिएको गुप्तेश्वर महादेव मूर्ति
आज मिति २०७६ बैशाख २६ गते बिहिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख २५ गते बुधबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख २४ गते मंगलबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
काठमाण्डौंका प्रहरी प्रमुख सहित ७ एसएसपीको सरुवा, को कहाँ ?
आमाको सम्मान गर्ने संस्कारलाई जीवन्त गर्नुपर्ने
आज मिति २०७६ बैशाख २३ गते सोमबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख २२ गते आइतबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख २१ गते शनिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख २० गते शुक्रबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख १९ गते बिहिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख १७ गते मंगलबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख १६ गते सोमबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख १५ गते आइतबार, तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख १४ गते शनिबार, तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख १३ गते शुक्रबार, तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख १२ गते विहिबार, तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख ११ गते बुधबार, तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख १० गते मंगलबार, तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख ९ गते सोमबार, तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख ८ गते आइतबार, तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख ७ गते शनिबार, तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख ६ गते शुक्रबार, तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख ५ गते विहिबार, तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
आज मिति २०७६ बैशाख ४ गते बुधबार, तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
२०७६ सालको दोश्रो दिन आज मिति २०७६ बैशाख २ गते सोमबार, तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
२०७६ सालको पहिलो दिन आज मिति २०७६ वैशाख १ गते आईतबार , तपाईको राशिफल हेरौं कस्तो छ ?
आज नव वर्ष २०७६ सालको पहिलो दिन आज मिति २०७६ साल बैशाख मैनाको १ गते आईतबार , तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
बि.सं २०७६ सालको शुभाशुभ फलादेश
२०७५ सालको अन्तीम दिन आज मिति २०७५ चैत्र ३० गते शनिबार, तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
ठूलाकोटलाई धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यमा विकास गरिने
मिथिलामा वासन्ती छठ सम्पन्न
मिति २०७५ चैत्र २९ गते आज शुक्रबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
मिति २०७५ चैत्र २८ गते आज विहिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
मिति २०७५ चैत्र २७ गते आज बुधबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
मिति २०७५ चैत्र २६ गते आज मंगलबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
मिति २०७५ चैत्र २५ गते आज सोमबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
मिति २०७५ चैत्र २४ गते आज आइतबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
कालिका भगवती मन्दिरमा भक्तजनको भिड
आज शनिबारदेखि नयाँ संवत्सर शुरु हुँदै
मिति २०७५ चैत्र २३ गते आज शनिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
मिति २०७५ चैत्र २२ गते आज शुक्रबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
मिति २०७५ चैत्र २१ गते आज विहिबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
मिति २०७५ चैत्र २० गते आज बुधबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
मिति २०७५ चैत्र १९ गते आज मंगलबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल
मिति २०७५ चैत्र १८ गते आज सोमबार तपाँईको दिन कस्तो रहने छ ? हेरौ राशिफल